Telemedia (PTY) LTD သည်သူတို့၏စစ်ဆင်ရေးအတွက် FileCatalyst ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Telemedia မှာ (Pty) LTD မှ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် FileCatalyst Choses
Telemedia မှာ (Pty) LTD မှ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် FileCatalyst Choses
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတစ်ခုEmmy®ဆုရရှေ့ဆောင် Telemedia မှာ (Pty) LTD မှယခုသုံးပြီးကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် FileCatalyst သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်။ Telemedia မှာ (Pty) LTD မှချုပ်လုပ်ရညျအသှေးဖြေရှင်းချက်ထောက်ပံ့များအတွက်ခိုင်မာသောသက်သေတွင် track record နှင့်အတူန်ဆောင်မှုများထုတ်လွှင့်ပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာများ၏တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Telemedia မှာ (Pty) LTD မှမိမိတို့၏ဦးခေါင်းကိုရုံး Rivonia, ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ထဲမှာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတောင်အာဖရိကတွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့ကအစကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်များတွင် client များအစေခံဖို့အာဖရိကစျေးကွက်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်ကြပါပြီ။
Telemedia မှာ (Pty) LTD မှ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့:
SNG နှင့် Flyaway န်ဆောင်မှုများ
Telemedia မှာယခုအသုံးပြုနေသည် FileCatalyst သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးစစ်ဆင်ရေးများအတွက် 10Gbps မှတက်၏အမြန်နှုန်းမှာ Point-to-point file ကိုလွှဲပြောင်း accelerates ကြောင်းဆာဗာနှင့် client ကို applications များ၏တိုက်ရိုက်တစ် suite ကို။ မူပိုင်ခွင့် UDP ကို-based ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းပညာအသုံးချဖို့, FileCatalyst ထိုကဲ့သို့သောအောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကွန်ယက်ကိုချို့ယွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှေးကွေးဖိုင်လွှဲပြောင်းများ၏ပြဿနာများကိုကျော်လွှားတယ်။ Telemedia မှာလည်း, သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးအခြေခံအဆောက်အအုံဖို့ client ကို applications များ HotFolder နှင့် TransferAgent အကောင်အထည်ဖော်အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခု web browser ကိုမှတဆင့်ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုနှင့် HotFolder အချိန်ဇယားနှင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းကို automation အသုံးပြုသည်ခဲ့ပါသည်။
"FileCatalyst ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်အခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီစီးပွားဖြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလည်ပတ်ကျနော်တို့က၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်နေဖြစ်ပါတယ် "ဟုချားလ်စ်ဘိတ်, Telemedia မှာ (Pty), LTD မှာကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ " ကျနော်တို့ကဘယ်လိုအတူအလွန်အထင်ကြီးနေကြတယ် FileCatalyst တိုက်ရိုက်နှင့်, client များ HotFolder နှင့် TransferAgent, တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Workflows simplifying စဉ်ကိုအလွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်လွှဲပြောင်းကြိမ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ "
"ကျနော်တို့က Telemedia မှာ (Pty), LTD နှင့်အတူဘုတ်ပေါ်ကြောင်းကြေညာဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည် FileCatalyst တိုက်ရိုက်, ကြှနျုပျတို့အခြား client ကိုအာဖရိကန်ကုမ္ပဏီများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုကိုမှဆက်ပြောသည်ရှိသည်ဖို့ပျော်ရွှင်နေကြတယ် "ဟုအလန် Atkinson သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး & Marketing ကို၏ဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ် FileCatalyst.
သည်အခြားစိတ်ဝင်စားအာဖရိကကုမ္ပဏီများအတွက်, Inala အသံလွှင့်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ထဲမှာ Ticketpro ခုံးမှာ 19st မှဇူလိုင်လ 21th ထံမှ Mediatech အာဖရိကကုန်သွယ်မှုပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းပါလိမ့်မည်, သူတို့ကကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ် FileCatalyst တဲ C23 ၌တည်၏။ အားလုံးတက်ရောက်ခြင်းတဲသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကြိုဆိုကြသည် FileCatalyst ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ suite ကို။
အော့တဝါ, ကနေဒါ, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်၏ခေါင်းဆောင်အနိုင်ရကာEmmy®ဆုအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးမှာတည်ရှိပါတယ်။ 2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်စစ်တပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုတထောင်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဖောက်သည်များ, စွမ်းအင် & သတ္တုတူးဖော်ရေး, ဂိမ်းနှင့်ပုံနှိပ်, ရှိပါတယ်။ FileCatalyst လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုအရှုံး FTP, HTTP ကို, ဒါမှမဟုတ် CIFS တူသောရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများအပေါ်ရှိသည်သောဆိုးကျိုးများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါ FileCatalyst အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www ကိုသွား။filecatalyst.com သို့မဟုတ် Twitter @ ပေါ်တွင်FileCatalyst.
Telemedia မှာ (Pty), LTD အကြောင်း
Telemedia မှာ (Pty) LTD မှရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများများအတွက်ထောက်ပံ့ရေး, installation နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ 1981 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. Telemedia မှာ (Pty) LTD မှတစ်ဦးခေတ်မီပြီးစွယ်စုံထုတ်ကုန်အကွာအဝေးပေးမယ့်ကျယ်ပြန့်-based မီဒီယာထုတ်လွှင့်စက်ရုံသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာကျနော်တို့အတွက် State-Of-The-Art ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူကြပြီသေချာ ဂြိုဟ်တု ကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသများ၏အနည်းငယ်ဖော်ပြမှထုတ်လွှင့်, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား signal ကိုဖြန့်ဖြူး, မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် SNG န်ဆောင်မှုများ, စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှု။ ကျနော်တို့ပြုပြင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတက်ရောက်ရန်တစ်ဦးအပြည့်အဝအရင်းအမြစ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းထူထောင်ခဲ့ကြ ဂြိုဟ်တု နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လွှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လီလက်မောင်းများအတွက်အရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့တဲ့သူဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများပေးသွင်းနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးအစပျိုးခဲ့ကြသည်။ ကျွမ်းကျင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အင်ဂျင်နီယာများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုနည်းဗျူဟာကျွန်တော်တို့ကိုတောင်ပိုင်းအာဖရိက၌အကြှနျုပျတို့၏စျေးကွက်ဝေစုကြီးထွားခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့မမြင်စဖူးနှင့်ကျွန်တော်ခွန်အားနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတစ်ခုအနေအထားကနေကမ္ဘာ့စျေးကွက်ထိုးဖောက်မှဆက်လက်။
ယခင်: ဂျာဗား Engineer- Big Data / တိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများ
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ Bulkans တက် Bulking ။ tera အာဒြိ Technologies ကမိတ်ဖက်ဂတိတော်ကိုဆောင်တတ်၏